Iingxowa zamabhinqa-i-fashion 2014
Imbali yemvelaphi yezikhwama zaqala kwi-XIV leminyaka, xa abafazi bembatha iingxowa ezikhethekileyo, apho unokubeka khona izinto eziyimfuneko. Ngekhulu le-XVII kwakukho i-reticuli - iingxowa ezihlotshiswe ngobuhlalu, ubuciko, obunobumba obukhulu. Emva koko, ngekhulu le-XVIII, izikhwama zesikhumba, "i-pompadours" yabonakala, eyaqala ukubonakala kwesikhwama sabasetyhini banamhlanje. Ukususela ngelo xesha, imfashini yeengxowa zamabhinqa isasazeka ukuya namhlanje, kwaye ngo-2014 ukhetho lwabo lukhulu kangangokuba le nto yokufikelela ingatshintshwa ubuncinci imihla ngemihla.
Namhlanje, isikhwama somkhwa mhlawumbi sisisiseko esibaluleke kakhulu, ngaphandle kweyiphi ibhinqa ayinakuyenza ngaphandle. Kodwa, ukuze le nkcazelo ibe ngumhlobiso wesitayela somfanekiso wakho, sincoma ukuba uzifundele ngeendlela zemoya kwiingxowa zowesifazane ka-2014.
Iingxowa zowesifazane eziphathekayo 2014
Kwixesha elitsha le-designers 2014 baye bavuya kwiimfashini kunye neeninzi zeemodeli ezahlukeneyo kunye neentlobo zeengxowa zamabhinqa. Ngokuqinisekileyo, indlela ehamba phambili yinkcazo yeklasi yesikhwama esimnyama, ekhoyo kuzo zonke iikopi zeempawu ezidumileyo. Izikhwabanzi ezimnyama zifanelwe ngokusemgangathweni kwimifanekiso yesibini kunye nomsondo. Ngokwenene, ukwenzela ukuveliswa komzekelo weklastiki, abaqulunqi basebenzisa iikhumba ezenziwe ngamacwecwe, okubonga ngenxa ye-gloss, ekhangeleka ngakumbi.
Phakathi kweengxowa zetekisi zango-2014 zaziyimodeli eyahlukileyo, phakathi kwazo ongayifumana imodeli engabonakaliyo, kunye nobunzima obukhulu, obunomfanekiso wejometri. Le ngxande, iyisikwere, ijikeleze, i-trapezoidal, i-triangular kunye ne-hexagonal. Ngexesha elitsha, abaqulunqi ekwenzeni izikhwama ezikhethiweyo ezifana nezikhumba zezilwanyana ezihlambulukileyo, izambatho, iplastiki, ukhuni, kunye nokuhlobisa, iintsiba kunye noboya zisetyenziswa. Kulo nyaka kuyimfashini yokudibanisa idibaniselwano eyahlukeneyo yeendwangu, umzekelo, isikhumba kunye noboya okanye isikhumba kunye neengubo.
Khetha isikhwama esekelwe kwisiganeko esicwangcisiweyo, umzekelo, ngomhla okanye ieholide, khetha i-handbag enhle kakhulu kunye nomhlobiso wangaphambili ngendlela yeentyatyambo, okanye uhlotswe ngeempahla ezintle, iintambo kunye nokuprintwa kweentyatyambo . Ukusetyenziswa kwansuku zonke, okulula, kodwa ngokulinganayo, iimodeli ziyakwenza.
Izicathulo zamabhinqa zakwa-2014
Imikhombiso yoMtshato 2015
Izinwele zentambo eziphathekayo zezinwele ezinde 2016
Amaqhinga ehlobo 2016
Isikhenkce 2017 - iimfashini zefashoni nezinto ezintsha kwihlobo le-2017
Imibala ephathekayo iyawa ngo-2013
Iingqayi zebhokisi 2016
Iingqungquthela zentambo yamaTyhini 2016
Iibhattshi zasehlobo 2016
Izinwele zezinwele zezinwele ezide 2014
UBrad Pitt wenqaba ukuhlawula i-alimony ku-Angelina Jolie
Ukutya kunye nokuvuvukala kwepascreas
Iintlobo zesifo seswekile
Iqoqo lasehlobo le-Guerlain 2013
I-Royal Kanin yamakhiti
I-brronchitis - unyango kunye nezilwanyana zomntu
Indlela yokumisela ipolisi?
Kalina - okuhle nokubi
Iplagi yomxube ngexesha lokukhulelwa
Yintoni eluncedo kwilitha?
I-party ye-Bachelorette ngaphambi komtshato
Kutheni i-clitoris ikratshiwe?
Chukumisa ibha yetswidi
Iigugu ezivela kwi-turquoise
Izambatho ezivela kwi-chiffon 2016
Ungakulibala njani umthandayo - iingcebiso zengqondo yeengqondo
Indlela yokuvala i-cherry compote ebusika?
Ukuguqulwa kwezilwanyana kwi-diapers
Iikhizi ezivela kwi-oki eqinile